Fambolena sy fizahantany : nanome fanampiana 7,5 tapitrisa euros ny Frantsay | NewsMada
Fambolena sy fizahantany : nanome fanampiana 7,5 tapitrisa euros ny Frantsay
Vita, omaly tao amin’ny minisiteran’ny Fitantanambola sy ny tetibola, ny fanaovan-tsonia fanomezan’ny Agence française de développement (Afd) ny fanjakana malagasy ho fanampiana ny sehatry ny fambolena sy ny fizahantany. Niara–nanao sonia ny masoivoho frantsay, Vouland-Aneini, sy ny minisitra Rakotoarimanana Gervais.
Faritra Vakinankaratra, Alaotra, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ireo no faritra hanaovana tetikasa manokana ho fampitomboana ny vokatra any amin’ireo faritra ireo, nanomezana fito tapitrisa euros (24 miliara Ar). Hifantohana amin’izao fanampiana izao ny fanatsarana ny voly legioma sy voankazo, vary ary kafe, samy mampalaza ireo faritra ireo. Hahita tombontsoa amin’izany ny fianakaviana mpamboly 150.000, izay tokony hahita fitombon’ny fidiram-bola ao aminy.
Betsaka ny asa miandry, toy ny fanaovana tohodrano sy izay fotodrafitrasa hafa any ambanivohitra; eo ihany koa ny fanofanana ara-teknika sy ny famatsiana masomboly. Nohamafisin’ny minisitry Fambolena, Ravatomanga Roland, ny fitandroana ny tontolo iainana amin’io tetikasa io, maharitra efa-taona.
Ny tetikasa faharoa, 500.000 euros (2 miliara Ar), ho fanofanana ny tanora amin’ny sehatry ny fizahantany. Miara-miasa amin’izany ny minisiteran’ny Fizahantany sy ny minisiteran’ny Fanofanana momba ny asa. Ny voalohany, mandrafitra ny politika takina hisarihana ny mpizahatany ary ny faharoa, miantoka ny fanofanana. “Tsy maharaka ny tsenan’ny asa, betsaka ny tanora mitady asa ka anisan’ny manampy azy ireo ny fisian’izao fanofanana izao”, hoy ny minisitry ny Fitantanam-bola, Rakotoarimanana Gervais, notronin’ny minisitra roa lahy, Andriantiana Ulrich (Fizahantany) sy Ramanantsoa Benjamina (Fanofanana momba ny asa). Antenaina ho tsara tantana ny vola.
CSA (1) : Centre de services agricoles ; FRDA (2) : Fonds régionaux de développement agricole.